Injection မှို Tool ကိုဒီဇိုင်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
Injection မှို Tool ကိုဒီဇိုင်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Injection မှို Tool ကိုဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်များ)
မြင့်မားသော Precision အော်တိုမှိုအစိတ်အပိုင်းများလက်ဆောင်ဌာနမှူးမီးအိမ်
ကားတစ်စီး၏ဆုံးတောင်းဆိုမှုများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင့်မားသောမှိုဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ပါတယ်သော headlamp ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်လက်ဆောင်ထုတ်ကုန်: Automobile အစိတ်အပိုင်းများ: မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းဘက်၏ကားကိုအလှဆင်, အလိုအလျောက်ဗီဒီယိုအားအမှုစသည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ,...
Precision Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ
ဒီထုတ်ကုန်ဟာရှင်းလင်းသူများ shell ကို, တိကျဆေးထိုးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှု, ကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်အဘို့ဆေးထိုးတန်ဆာစက် 350 တန်ချိန်သုံးပြီးစီးပွားဖြစ်စားသုံးသူထုတ်ကုန်, တိကျဆေးထိုးတန်ဆာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။...
အဆိုပါဘန်ပါစုပ်ယူများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများနှင့်ပြင်ပကမ္ဘာ၏သက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်မီနှင့်အပြီး, က, အဘမ်၏ဂျီသြမေတြီနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်စဉ်းစားရန်အသွင်အပြင်သေချာစေရန်, ဒါပေမယ့်လည်းစက်မှုမှညီလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်...
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ဆအရောင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, နှစ်ဆအရောင်ထုတ်ကုန်ဆေးထိုးတန်ဆာနှစ်ချက်အရောင်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ချုပ်ကိုင်ခလုတ်, ထုတ်ကုန် shell ကို, ပလပ်စတစ်ဆုကြေးဇူးကို box ကိုအိမ်ထောင်စုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ် polychromatic ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှု။...
ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကြီးမားတဲ့အော်တိုမှို, ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှို, အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစားကိုရည်ညွှန်း, ထုတ်လုပ်မှုမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ပိုကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း။ အဆိုပါသေဆုံး 3d2d...
မြင့်မားသောဖိအားမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများမှို Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျော့ပြေနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် porosity မှအနိမ့် sensitivity ကိုအဖြစ်အချို့သောထူးခြားတဲ့ solidification ဂုဏ်သတ္တိများ, ရှိသည်, ထို့ကြောင့်ပိုကောင်းထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယံနှင့်ကြေးနီကဲ့သို့သောအခြား ချ. သတ္တုများထက်ချခြင်းကိုနိုင်ကြသည်။...
နှစ်ချက်အရောင်ပလတ်စတစ်မှို 550T Injection ကိုမှိုစက်
အရည်အသွေးဗဟိုပြုအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်ကျနော်တို့ပလတ်စတစ် Precise သေမှိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အကွာအဝေးသတ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုပလပ်စတစ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်မှဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နေသည်။...
မှိုဒီဇိုင်းပလတ်စတစ် Tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများစိတ်တိုင်းကျနှစ်ဦး-color မှို
ကျနော်တို့ Precision ပုံသွင်းထားထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အထူးပြု။ ထိုထုတ်ကုန်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒိုမိန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများနေသောကျွမ်းကျင် & စိတ်ရင်းပညာရှင်များ၏အဖွဲ့ကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် client...
OEM အမြင့် Precision နှစ်ချက်အသွေးအရောင်စုံ Injection ကိုမှိုအစိတ်အပိုင်းများ
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့သို့မဟုတ်မမှန်ပုံစံနှင့်အတူတစ်ဦး Two-အရောင်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိရန်နောက်ဆုံးဖို့, တဦးတည်းမှိုသို့နှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့အရောင်ပစ္စည်းများထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကိုရောထွေးအရောင်များအားဖြင့်ပုံသွင်းသကဲ့သို့, ကုန်ကြမ်းလည်းပေါင်းစပ်ဒီဂရီရှိသင့်ပါတယ်။...
နှစ်ဦးကိုအရောင် Injection ကိုမှို Precision အစိတ်အပိုင်းများ 230T စက်
စက်မှုလုပ်ငန်းအန္တရာယ်များတဲ့ကျယ်ပြန့်မှုနှင့်အတူကျနော်တို့စျေးကွက်အပေါ် Automotive အပိုအစိတ်အပိုင်းများမှို၏ကျယ်ပြန့ထောက်ပံ့တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ နှစ်ဆအရောင်ပလပ်စတစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်, နှစ်ဆဆေးထိုးစက်တစ်ခု elastomeric...
နှစ်ချက်အသွေးအရောင်စုံ Injection ကိုမှို Overmolding မှို
နှစ်ဦးကိုအရောင် Injection ကိုမှိုအားသာချက်များ: ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့အဓိကကုန်ကြမ်းများ၏အနိမ့်အရည်အသွေးအားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ချက်အရောင်များသောအားဖြင့်နှစ်ဆကိုခေါ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဆေးထိုးတန်ဆာသေနတ်ဖြစ်ပါတယ်။...
Precision နှစ်ချက်အသွေးအရောင်စုံ Injection ကိုမှိုအစိတ်အပိုင်းများ
ရိုးရာဆေးထိုးတန်ဆာနှင့်နှိုင်းယှဉ်, ပလတ်စတစ်မှိုလုပ်ငန်းစဉ်၏နှစ်ဆရိုက်ချက်အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်: တစ်ခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှ, တစ်ဦး core ကိုအလယ်တန်းပစ္စည်းပြန်သုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ 230T, 250T နှင့် 550T အီနှစ်ချက်အရောင်မှိုစက်ယန္တရားရှိသည်။ ဖောက်သည်ရရှိနိုင်အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြစရာ။...
အဖုံးအဘို့အမြင့် Precision နှစ်ချက် Injection ကိုမှို
Multi-အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာ မှစ. နှစ်ဆဘုံဆေးထိုးတန်ဆာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် application အနာဂတ်မှာတဖြည်းဖြည်းရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်အားဆေးထိုး tool ကိုအစားထိုးတဲ့သဘောထားကိုရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဆန်းသစ်ဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာ,...
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာနှစ်ခုရိုက်ချက်သို့မဟုတ် Multi-shot တန်ဆာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအရောင်အစိတ်အပိုင်းရနိုင်အောင်ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်းလှသော Multi-function ကိုပုံသွင်းကုန်ပစ္စည်းများထဲမှခြေလှမ်းအတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကနှစ်ချက်အရောင်...
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှို Components
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်စေနှစ်ခုရိုက်ချက်သို့မဟုတ် Multi-shot တန်ဆာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးနှစ်ဦး-အရောင်နှင့် / သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ component တစ်ခုနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ဖျော်ဖြေနေသည်။ ပလပ်စတစ် Injection...
နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှိုစက် 250T မှိုလုပ်ခြင်း
OEM Injection ကိုအသေးစားပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများပုံသွင်း
Celcon လည်း polyoxymethylene (Pom), polyacetal, ဒါမှမဟုတ် polyformaldehyde အဖြစ်လူသိများ, acetal တစ်ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် thermoplastic ထူးချွန်ခိုင်မာခြင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ wear ကမ်းလှမ်း, ခုခံခြင်းနှင့်ဓာတုအရည်ပျော်ပစ္စည်းခုခံ, လွယ်ကူသောအရောင်များ,...
ပလပ်စတစ်အပိုအစိတ်အပိုင်းများပိုငျးပိုငျးပလပ်စတစ် Injection ထုတ်ကုန်များ
ကျနော်တို့ Precision မှို Tech မှအတူဆေးထိုးပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ် ။ တစ်စီမံကိနျးအတှကျညာဘက်ပစ္စည်းနှင့်အရောင်ရွေးချယ်ခြင်းပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများဖန်တီးခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အချက်တွေနှစ်ခုရှိပါတယ်။...
အသေးစား Injection ကိုစက်အပိုင်းကို ABS ပလတ်စတစ် Tool ကို
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခိုင်မာခြင်း, ခွန်အားကိုသက်ရောက်မှုခုခံနှင့်အပူချိန်ခုခံ, ကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောနှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာ tool ကိုစိတျအပိုငျးလျှောက်လွှာဒေသများရှိပါတယ်။ ကို ABS သို့သော်ကောင်းသောဓာတုခုခံကြပါဘူး,...
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများအသေးစားပလပ်စတစ်ပိုငျးပိုငျး
ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာတန်ဆာများ၏အသုံးအများဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးပုံစံအဖြစ်လူသိများကြောင်းအတော်ကြာကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသူ့ဟာသူအလွန်အစာရှောင်သည်အခြားနည်းလမ်းများမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, အမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်းကိုကပင်ပိုမိုထိရောက်သောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစေသည်ဖြစ်ပါတယ်။...
ကအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်အသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ injection တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုရရှိနိုင်တန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အများဆုံးစွယ်စုံဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘက်စုံသုံးရန်,...
စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှို Components
ပလတ်စတစ်အရင်ကထက်ပိုပြီးပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါချေးခုခံနှင့်ဗေဒအယူခံဝင်များ၏အားသာချက်များနှင့်ပလတ်စတစ်နှင့်အတူဤဆေးထိုးတန်ဆာပစ္စည်းများတိုးတက်မှုအများအပြားစားသုံးသူနှင့်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဗဟိုချက်ဇာတ်စင်ယူပြီးနေကြသည်ပေါင်းစပ်။ ကြောင့်၎င်းတို့၏ဘက်စုံ,...
စိတ်ကြိုက်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ
Thermoplastics ထို့နောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်တစ်ဦးမှိုထဲမှာအအေးအပူနေကြသည်။ အဆိုပါ Thermoplastic မှိုအပိုင်းအအေးပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှပြန်ပြောင်းနှင့် re-အရည်ကျိုပြီးထပ်မံအအေးနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, thermoplastics ပြန်သုံးခြင်းနှင့်ပြန်သုံးဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။...
အမြင့် Precision အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ injection မှိုလက်ဆောင်
PP ပစ္စည်းနှင့်အတူထိုးသွင်းအဆိုပါတိကျစွာမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ။ polypropylene ထုပ်ပိုး, လျှပ်စစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အိမ်သူအိမ်သားပစ္စည်း, မော်တော်ကားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်း application များအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ ပိုများသောအထူးသ, PP များစွာသောအခြားပစ္စည်းများအကြား,...
နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှို
Injection မှို Tool ကိုဒီဇိုင်း
မှို Tools များအပိုင်း
injection မှို Tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများ
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုဒီဇိုင်း